Ungayisebenzisa kanjani ikamelo | Ota Ward Hall Aplico
<Isixwayiso> Kumakamelo amakwe nge *, indlela yelotto ishintshiwe ukuvikela ukutheleleka okusha kwe-coronavirus.
Indlela yeLottery IPlaza yaseDaejeon Citizen Bamba iqhaza ku-lottery ehholo elincane.
* Indawo yelotto kuzoba yi-Ota Citizen's Plaza.
I-Ota Ward Hall Aplico, hhayi indawo ehlukileSicela wazi ukuthi kuzoba njalo.
Indlela yesikhathi sokufaka isicelo Ukwamukelwa kwamukelwa e-Ota Ward Plaza Small Hall kusuka ngo-1: 20 ntambama kuya ku-2: XNUMX ntambama ngosuku lwe-lottery.
(ILottery iqala ngo-2: XNUMX ntambama) Ukwamukelwa kwamukelwa e-Ota Ward Plaza Small Hall kusuka ngo-9: 20 ekuseni kuya ku-10: XNUMX ekuseni ngosuku lwe-lottery.
(ILottery iqala ngo-10 ekuseni) Kusukela ngomhlaka 4 kuya ekupheleni kwenyanga, izinyanga ezine ngaphambi kwenyanga yokusetshenziswa, faka isicelo eUguisu Net, Ota Ward Hall Aplico, noma ewindini lomhlangano wase-Ota Ward.
Isikhathi sokugcina sokufaka isicelo / sokukhokha Kusukela osukwini lwe-lottery kuze kube ngumhla wamashumi amabili enyangeni efanayo
Indawo yokwamukela isicelo / isikhathi sokwamukela Ota Ward Hall Aplico
(Nsuku zonke ngaphandle kwezinsuku ezivaliwe) ・ I-Ota Ward Hall Aplico
9:7 am to XNUMX:XNUMX pm (nsuku zonke ngaphandle kwezinsuku ezivaliwe)
Facility Indawo ngayinye ewadini: 9:7 am to XNUMX:XNUMX pm
Isikhathi sokugcina sokufaka isicelo / sokukhokha Sicela ukhokhe ngesikhathi sokufaka isicelo. 1. Uma ufaka isicelo online, sicela ukhokhe kungakapheli izinsuku eziyi-14 kusukela ngosuku lokufaka isicelo.
2. Uma ufake isicelo kwikhawunta, sicela ukhokhe ngesikhathi sokufaka isicelo. * Uma ufaka isicelo kusuka ezinsukwini ezi-2 ngaphambi kosuku lokusetshenziswa ngosuku lokusetshenziswa, yi-Ota Ward Hall Aplico kuphela ezotholakala.